Afovoany – Atsinanana : Isiraely sy ny Fampiasana Fôsfôra Fotsy ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2019 12:05 GMT
Nihorohoro ireo mpijery fahitalavitra manerantany nahita ireo sary mampihoronkoditr'ireo niharan-doza tao Gaza – izay ny sasantsasany tamin'izy ireo dia nanjary ratsy endrika ary efa mila tsy ho fantatra intsony. Miantso an'i Isiraely ihany koa ny Fikambanana Tsy Miankina iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona Human Rights Watch, mba hamarana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fôsfôra fotsy mandritra ny adiny amin'i Gazà.
Avy ao Ejipta, manoratra (amin'ny teny anglisy) ny blaogera iray, Zeinobia, hoe:
Manjary afa-baraka i Isiraely mampiasa an’ireo baomba misy fôsfôra ireo. Ny fahitàna fotsiny an'ireo sarina fahamaizana manjo ny vatan'ireo Palestiniana, ny herinandro voalohany, dia ampy hahalalana fa mampiasa baomba misy fôsfôra izy ireo, na dia tsy ireo baomba ‘mandefa potipotiny aza‘ izay fantantsika fa nampiasainy tao Libanona.
Fa marina fa amin'ny maha blaogera tsotra, tsy afaka ny hahalala aho fa ireo Hery Fiarovana Isiraeliana (IDF) dia mampiasa baomba misy fôsfôra, tany ampiandohana, noheveriko ho nanandrana karazana baomba vaovao izy ireo namelezana an'ireo Gazaouis mahantra, nony avy eo, noheveriko ho baomba mandefa potipotiny, izay ankafizin'izy ireo. […]
Na dia ny mpilaza vaovao iraisam-pirenena toy ny Times aza dia miresaka an'io.
Mazava ho azy, nolavin'i Israely io fiampangàna ahitan-doza ho nampiasa fitaovana voararan'ny lalàna iraisam-pirenena io, nentina namelezana an'ireo mponina ao Gaza. Voalohany indrindra, ireo voalaza fa mpampihorohoro avy amin'ny Humas aloha no nokendreny [Isiraely], ary avy eo miteraka setroka ireny baomba ireny!!
Afaka milaza izay tiany izy ireo, saingy kosa tsy afaka manova ny marina, na inona na inona ezaka ataon-dry zareo.
Setroka miakatra eny ambonin'i Gazà taorian'ny fanafihana Israeliana. Sary: Amir Farshad Ebrahimi
Araka ny voalazan'ny tranonkala Human Rights Watch (teny anglisy):
Ny 9 sy 10 Janoary 2009, nahita ny firefodrefotr'ireo tifitra an'habakabaka maro nataon'ny tafondro fandefasana tifitra fôsfôra fotsy ireo mpikaroka avy amin'ny Human Rights Watch tao Isiraely, teny ambonin'izay voamarina fa faritry ny tanànan'i Gaza /Jabaliya. […]
Resy lahatra ny Human Rights Watch fa ny fampiasana ny fôsfôra fotsy any anatin'ireo faritra be mponina ao Gaza dia manitsakitsaka ny fepetran'ny zon'olombelona iraisam-pirenena, ka tokony raisina ireo fepetra rehetra azo atao hisorohana ny ratra sy fahafatesan'ny sivily.
Hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana an-tanety nataon'ny Israeliana tao Gaza, ny 3 janoary 2009, marobe ireo vaovao nitranga tany anatin'ireo media mikasika ny mety ho fampiasan'ireo Hery Fiarovana Israeliana (IDF) ny fôsfôra fotsy. Nanambara tamin'ny Human Rights Watch sy tamin'ireo mpanao gazety ny IDF fa tsy mampiasa fôsfôra fotsy ao Gaza izy ireo. Ny 7 janoary, mpitondra teny an'ny IDF no nilaza teo amin'ny fantsona fahitalavitra CNN hoe: “Afaka manamafy marina aminareo aho fa tsy nampiasaina mihitsy ny fôsfôra fotsy.”
Vehivavy Palestiniana iray Laïla El-Haddad, izay ao Gaza amin'izao fotoana izao ireo ray amandreniny, no nanampy fa (teny anglisy):
Niresaka ny hery tsy nisy toy izany nampiharin'ny tafika Israeliana tamin'izy ireo ireo mponina tao Gaza – saingy notondroin'izy ireo ihany koa ireo karazana fitaovam-piadiana vaovao. Tsy mahagaga izany – Gaza foana no “toerana fanaovana andrana” – nanomboka hatramin'ireo mamono hozatra (teny anglisy) nampiasaina tao Khan Younès tamin'ny taona 2003 ka hatramin'ireo “fanafihana an'habakabaka matoatoa” mihazakazaka mihoatra noho ny hafainganam-pandehan'ny feo. Ankehitriny, resahina ireo baomba mandefa potipotiny, ny oraniôma nohalefahana sy ny fôsfôra fotsy.
Tsy ireo ihany no fitaovampiadiana azon'ny olona fantarina. Ireo mpifandray amin'ny CNN mijanona eny akaikin'ireo sisintany ao amin'ny lemak'i Gaza ihany koa niresaka mikasika an'ireo karazana fipoahana vaovao.
Norveziana mpitsabo roa no nanamafy fa nahitana soritra oraniôma nohalefahana ihany koa ny vatan'ireo niharam-boina sasantsasany izay naratra hatramin'ny 27 desambra nanombohan'i Israely ny fanafihany tao amin'ny lemak'i Gaza, araka ny voalazan'ny PressTV.
Azo vakiana ihany koa ireo fampitàm-baovao izay milaza fa sady mampiasa an'ireo baomba mandfa potipotiny ny tafika Israeliana no mampiasa fôsfôra fotsy ihany koa any amin'ny faritra avaratry ny lemak'i Gaza, fitaovam-piadiana iray mandoro izay nampiasain'i Etazonia tao Iraka (izay no manazava ireo fipoahana goavana misy ftselatselatra mamiratra, tsy mbola fahita hatrizay tao Gaza).
Omeny antsipirihany ihany koa ny famaritana nataon-drainy, mpitsabo, momba ‘ireo maratra izay notsaboiny tao Gaza:
Omaly, tao amin'ny hopitalin'i Shifa ny raiko nitsabo marary tratran'ny sasantsasany tamin'ireny zava-mipoaka ireny. Toy izao manaraka izao ny famaritana nomeny:
“Nisy an'ireo andiana baomba nilahatra, havana fotsy ngezabe iray, narahina setroka fotsy izay niteraka fangirifiriana henjana sy tsy fahafahana miaina : manjary mena be ireo faritra tratrany, mibontsina teny amin'ny hoditra rehetra, ary mangidihidy”.
Anaty fanamarihana iray hafa, blaogera iray hafa, The Rag bag, no nitanisa (teny anglisy) araka ny voalazan'ny Times Online, ireo tranga vitsivitsy mikasika ireo baomba misy fôsfôra fotsy:
- Fôsfôra fotsy: vokatra simika iray ahitàna tara-tsetroka izay mety handoro hatrany anaty taolana
- Ny fôsfôra fotsy dia miteraka lelafo mavo mivaivay rehefa mifangaro amin'ny oksizena, mamoaka setroka fotsy matevina
- Ampiasaina ho toy ny rindrin-tsetroka izy na ho an'ireo fitaovana fandoroana, saingy afaka ihany koa aparitaka ho toy ny fangaro anatn'ny fitaovana fandefasana lelafo famonoana olona, afaka miteraka fahamaizana tena mety hahafaty
- Eo amin'ny grady faharoa na fahatelo eo foana matetika ireo fahamaizana vokatry ny fôsfôra satria tsy mitsahatra mandoro ireo singa madinika mifampikasoka amin'ny hoditra mialohan'ny tena hahalevona azy tanteraka – mety ho tonga hatrany amin'ny taolana izany
- Mandrara ny fampiasana ny fôsfôra ho toy ny fitaovam-piadiana amelezana sivily ireo Fifanarahana tao Genève, saingy tsy raràn'ny lalàna iraisam-pirenena kosa ny fampiasana azy ho toy ny rindrin-tsetroka
- Efa nampiasa fôsfôra fotsy i Israely nandritra ny adiny tamin'i Libanona, tamin'ny 2006
- Matetika nampiasain'ireo hery britanika sy amerikana izy io tamin'ireo ady vao haingana, indrindra fa nandritra ny fanafihana an'i Iraka tamin'ny taona 2003. Nampisy tsikera marobe ny fampiasàny azy.
Mandritra izany fotoana izany, tao an-tanànan'i Rafah, any amin'ny sisintany iraisan'i Ejipta sy Gaza, taterin'ilay blaogera ejiptiana sady mpikatroka momba ny zon'olombelona, Nora Younis, eo amin'ny vovonana fanoratana bilaogy madinika, Twitter, fa:
(“Gaza : zazalahy Palestiniana iray, azo heverina ho naratra vokatry ny fôsfôra fotsy no niampita ny sisintanin'i Rafah ho any amin'ny hopitalin'i Arish”)